Iyo Imwe Traffic Inobva muGoogle Analytics? | Martech Zone
Vhiki rino kubasa, mumwe wevatengi vedu aibvunza kuti chii "chimwe" traffic sosi muGoogle Analytics (GA).
Iko hakuna kunyanya kuwanda mune iyo chaiyo interface yeGoogle Analytics saka iwe unofanirwa kuita kumwe kuchera. Traffic sosi inozivikanwawo seye nzira muGA. Ndakaita zvekuchera ndikaona kuti Google Analytics inotora iyo yepakati otomatiki kune mamwe masvikiro, mukurumbira kuve e.
Kuti uwane rondedzero yemamwe masvikiro, unofanirwa kudzvanya paTraffic Source> Zvese Traffic Sources. Izvi zvinokupa iwe runyorwa rwese ako manyuko emigwagwa pamwe nemasvikiro.
Iko kune kudonhedza uko iwe kwaunogona kusefa kune iyo chaiyo yepakati, zvakare, kuratidza ese mamwe emigwagwa sosi.
Ichi chingave chishandiso chinobatsira kwazvo. Kana iwe uri kushandisa tsambambozha Marketing kutyaira traffic kudzokera kune yako webhusaiti, unogona kuyera kuti uri kuita sei nekuwedzera querystring iyo inotsanangudza iyo yepakati:
Pane akati wandei ma parameter anowanikwa kana uchida kuyera mishandirapamwe yako.
Tags: google analyticsimwe tsime renziratraffic sosiutm_medium
Mamwezve Mamwe Matipi ayo Seti Akashaikwa paSainzi
Kukadzi 14, 2009 na4: 07 PM
Ingo tarisa izvi mazuva mashoma apfuura ndikatadza kuzviziva. Zvino ndinoziva sei… ndatenda!
Iyo Blogger Kunobva
Kukadzi 14, 2009 na11: 26 PM
Ndakaona izvi asi handina kumbozvifunga zvakanyanya. Icho chidimbu chakanaka hazvo. Ini ndinoronga kuve neemail camping saka kodhi iyi ichauya inobatsira.
Kutenda nezano rakakura! Ndichange ndichitamba nemenyu inodonha kazhinji izvozvi…
Kukadzi 15, 2009 na2: 00 PM
Ndakafara chinyorwa changu chaigona kubatsira!
Infact pane zvakawanda zvekunzwisisa kwatiri mune iyi Traffic Source. Tinogona kushandisa zvikamu kusiyanisa Organic uye inorganic traffic inouya kubva kunjini dzekutsvaga dzinouya dzinobatsira panguva. Infact zvimwe zvakawanda kubva kuGA!
May 7, 2009 pa 2: 55 PM
Kutenda nezano rakakura! Ini ndichave ndichitamba neiyi inodonhedza menyu kazhinji ikozvino?
Apr 21, 2011 pa 1: 17 PM
Hei Doug - ndatenda iyo posvo. Ndanga ndichiona izvi "Zvimwe" zvichiwedzera pamusoro pevhiki uye ikozvino nzwisisa zvave kuitika.
Apr 21, 2011 pa 1: 20 PM
Saka tinofara kuti takakwanisa kubatsira, Steven!
Aug 15, 2011 na9: 32 PM
asi pane nzira yekutevera iyi link mugoogle analytics kune traffic traffic. Ndakave nekuwedzera kukuru kwekushanyirwa kubva kunowanikwa traffic asi ini handizvizive uye handisi kuiwana pawebhu?
Aug 15, 2011 na10: 22 PM
Ehe, iwe unokwanisa chaizvo asi zviri zvishoma zvekurwadziwa. Iwe unofanirwa kudzvanya pane yega yega yekutsvaga sosi doma wakasununguka uye ipapo uchaona izere nzira yekutumira. Yakabatanidzwa skrini (ine iyo nyowani dhizaini yeGGA).
Gumiguru 31, 2011 na8: 21 PM
Ndanga ndichiwana 50% yakanangana nemotokari mazuva ano… yehuwandu hwakatenderedza mazana maviri kusvika mazana matatu ezuva nezuva. 200% yeakananga kurova matsva, uye bounce mwero iri kutenderedza 300% - 02%… Zviri normal here? Chii chingave chikonzero? Uye chii chako bounce mwero?
Gumiguru 31, 2011 na9: 19 PM
Ini ndinofunga 50% yakanangana netraffic ndeye yakanakisa stat pamwe neye bounce rate iwe yaunotsanangura. Sezvo yako saiti inokura mukuzivikanwa - kunyanya nekutsvaga uye nemagariro - iwe unowana akawanda akakwirira manhamba pakutsvaga uye kutsvaga traffic, uye yakakwira bounce mitengo yekuenda navo!
Ini pachokwadi handimiriri saiti imwe kuenda kune imwe… Ini ndinorwa nhanho dzekare nemaitiro matsva kuona kuti tiri kufamba negwara chairo. Kutenda nekugovana Namanyay!
Nov 1, 2011 pa6: 19AM
Ndatenda nekukurumidza kupindura 😀